Ugu dambeyntii, waxay umuuqataa in taxanaha Apple Watch 7 la heli doono bisha Sebtember | Waxaan ka imid mac
Wax yar ayaa ka dhiman soo bandhigidda waxa noqon doona taxanaha Apple Watch 7 si ay u gaaraan guryaheena.Xanta ayaa tilmaamaysa inay jiri doonto warar yar xagga software -ka laakiin waa inaan shaashadda ku aragnaa naqshad cusub. Ma aha oo kaliya darafyadiisa haddii aysan ahayn shaashad xoogaa ka weyn kuwii hore. Isbeddeladani waxay si cad u tilmaameen in imaatinka saacaddu uu yimid suuqyada way daahi doonaan laakiin Waxay u egtahay in ugu dambayn la heli doono Sebtember.
Isbedelka naqshadda Apple Watch, xanta ayaa tilmaamtay inay aad ugu badan tahay imaanshaheeda suuqyada ayaa dib u dhacay isbeddelka naqshaddaas awgeed. Cidhifyada laba jibbaaran ee badan iyo ballaarinta shaashadda, ayaa soo -saarkeedu ka sii adkaa. Markaa waxay aad ugu dhowdahay in iibkeedu uusan noqon doonin sidii loo qorsheeyey bilowgii wuxuuna socon karaa ilaa Nofembar ugu yaraan.
Si kastaba ha ahaatee qoraal cusub oo uu soo saaray falanqeeye Kuo, ayaa sheegaya in dhibaatooyinka la xaliyay waxaana la filayaa in iibinta Apple Watch la fulin karo bisha Sebtember iyada oo aan wax dhibaato ah. Waxay u muuqataa in Apple ay xallisay arrimaha tayada moobiilka, iyo in iibiyaha ugu weyn, Luxshare, uu bilaabi doono shixnado ballaaran badhtamaha-dhammaadka Sebtember. Intaa waxaa dheer, Kuo wuxuu leeyahay shixnadaha Watch si weyn ayay u kori doonaan sannadkan.
Isla warbixintan, ayaa lagu falanqeeyay dhibaatooyinka ka dhashay moodooyinka cusub. Dhibaatooyinka gaarka ah ee ay keenaan dhibaatooyinka silsiladda sahaydu, oo kala ah shaashadaha taabashada ee bilig -baxa oo aan dareen lahayn. Dhibaato muhiim ah oo ku filan in laga fiirsado in aan badeecada la iibin waqtigii loo cayimay.
Haddii wararkaan cusub la xaqiijiyo, Waxaan yeelan doonaa Apple Watch cusub bishaan Sebtember. Warka wanaagsan ee Apple iyo isticmaalayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ugu dambeyntiina, waxay umuuqataa in taxanaha Apple Watch 7 la heli doono bisha Sebtember.